Ma dhab baa in Paul Pogba uu isaga fariistay u ciyaarista xulka qaranka France kaddib ereyadii Madaxweynaha Faransiiska ee lidka ku ahaa diinta Islaamka? – Gool FM
Haaruun October 26, 2020
(Manchester) 26 Oct 2020. Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa lagu soo warramayaa inuu go’aansaday ka fariisashada u ciyaarista xulka qaranka France kaddib markii wadaxweynaha dalkaas ee Emmanuel Macron uu Islaamka ku tilmaamay argagaxisada caalamiga ah.
Dhammaan muslimiinta dunida daafahadeeda ku nool ayaa si caro leh kaga soo horjeestay ereyada aflaggaaddada ah ee uu madaxweynaha Faransiiska u geystay diinta sharafta leh ee Islaamka, tii oo ay jirto inuu si heer sare ah u sharfay ninkii sawirka kula maadeystay Nabigeenna iyo Suubanaheenna Muxammada (N.N.K.H).
Inta ugu badan saxaafadda Bariga Dhexe ayaa warinaya in kubbad qaabeeyaha Red Devils uu go’aansaday inuusan dib u xiran maaliyadda qaranka France kaddib Islaam nacaybka uu soo bandhigay Macron, balse Pogba iyo xiriirka kubadda cagta dalkaas ayaanan wali ka hadlin arrintaas.
27-jirkan ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inuu aad kaga xummaaday kaddib markii uu madaxweynaha Faransiiska tilmaamay in weerar argagaxiso oo ay Islaamka fuliyeen lagu dilay Samuel Paty kaasoo ay dowladda France guddoonsiisay biladda French Legion d’honneur – biladda farshaxaniistaha ugu sarreeya.
Paty oo ah macallin iskuul isla markaasna sawir gacan ku sameys ah ka sameeyay Rasuulka ayaa la dilay isagoo kasoo hayaamayay guriga una sii boqoolayay iskuulka uu wax ka dhigo kaasoo ku yaalla deegaanka Conflans-Sainte-Honorine oo 40KM Waqooyi Galbeed kaga beegan magaalada Paris.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Faransiiska ayaa ku dooday in macallinka la dilay uu isku dayay inuu sharraxo muhiimmada xoriyadda hadalka.
Memphis Depay oo ka farxiyay taageerayaasha kooxda Liverpool... (Muxuu sameeyay?)